Taariikhaha dhoofinta mini -ga ee IPad way iska guuraan ilaa dabayaaqadii Oktoobar horraantii Noofembar | Wararka IPhone
Taariikhaha dhoofinta mini -ga IPad way iska guuraan ilaa dhammaadka Oktoobar horraantii Noofembar
Maaha kiisaska oo dhan oo aan ku jirin dhammaan moodooyinka iPad mini -ka cusub ee Apple bilaabay maanta, laakiin shixnadaha ugu fog Waxay dhigaan dhoofinta moodeelka cusub ee iPad -yadan yar intii u dhaxaysay Oktoobar 28 -keedii iyo 9 -kii Nofembar.
Caqli ahaan waxaa jira nuances tan iyo Moodooyinka qaarkood, dhoofintu waa inta u dhaxaysa Oktoobar 18 iyo 25. Si kastaba ha ahaatee, kuwani runtii waa taariikho xad -dhaaf ah oo loogu talagalay soo -dhoofinta mid ka mid ah moodooyinkan iPad -ka cusub. Waxaan fahamsanahay in baahida loo qabo moodooyinkaan ay tahay mid aad u sareysa, inkasta oo ay run tahay in aanan rumeysneyn inay aad u badan tahay in la helo waqtiyada dhalmada ee dheeraadka ah.
Yaraanta qaybaha alaabta ceeriin ee loogu talagalay iPad mini
Sida aaladaha Apple intiisa kale, mini mini -ka iPad -ka lagama dhaafo yaraanta alaabta ceeriin ee wax -soo -saarka. Tani waxay ka muuqataa badeecadaha oo dhan laakiin shirkadaha waaweyn ee ay tahay inay soo saaraan kayd badeecad aad u badan waa la dareemi karaa. Eeg tusaale ahaan kiiska warshadaha baabuurta oo xitaa ku qasbanaaday inay joojiyaan khadadka wax -soo -saarka oo ay dib u dhigaan amarada macmiilka in ka badan nus sano ...
Qasaarooyinka saamiyada qaar ka mid ah dukaamada rasmiga ah ee Apple ama iibiyeyaasha idman ayaa bixiya wakhtiyada dhalmada ee berrito moodooyinka qaarkood. Qabashada ugu sareysa waa moodel 256GB ah oo laga heli karo berrito Apple Passeig de Gràcia, ee Barcelona. Kani hadda waa ciyaar raadinta xiisaha leh ee adeegsadayaasha maxaa yeelay marmarka qaarkood haddii baahidu cadaadiso waxaa wanaagsan in la raadiyo kaydka dukaamada jirka halkii laga iibsan lahaa Apple lafteeda. Miyaad ku heshay iPadkaaga mini -ga waqtigii loogu talagalay?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPad » Taariikhaha dhoofinta mini -ga IPad way iska guuraan ilaa dhammaadka Oktoobar horraantii Noofembar
Apple waxay soo bandhigaysaa "Spark" taxane documentary ah oo sahaminaya asalka heesaha
Apple wuxuu ku darayaa 16 waraaqo oo cusub oo loogu talagalay Apple TV